नालाको बाटोहुदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरू खुलेआम हिडडुल गर्दै
/ २०७६, २६ चैत्र बुधबार १६:३८ प्रकाशीत
प्रतिमा विश्वकर्मा ,२६ गते (कपिलवस्तु ) नेपाल र भारत दुबै देशमा लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा खेतीबारी र खोला नाला हुदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरू बढेका छन !मुख्य नाकाहरूमा दुबै देशका सुरक्षाकर्मी खटियेर ओहोर दोहोर ठप्प पारे पनि चोर बांटों हुदै भारतबाट नेपाल आऊंनेहारू बढेका छन !
भारतबाट विभिन्न स्थानमा मज़दूरी गरन गयेका मजदूरहरू कृष्णानगर नगरपालिका वार्ड नम्बर ५ र ६ सीमामा पर्ने सुरही नाला हुदै नेपाल प्रवेश गरीरहेको स्थानीय बाशिंदाले बतायेका छन ! यस्तै केहि मानिसहरू सीमा क्षेत्रको उखू गहु खेतीबाट नेपालमा आवत जावत गरीरहेको पाइएको छ !
कोरोना भाइरस (कोभिड़-19) को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा भारतका विभिन्न स्थानबाट लुकीछिपि गाऊ आइरहेकाले गर्दा कोरोना जोखिम हूने खतरा बढिरहेको कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड न. ६ का वार्ड सदस्य मकबूल मुसलमानले बताऊँनु भयो ! तयसरी लुकिछुपी आएकाहरू क्वरेनटाइनमा नबसेर खुलेआम हिडडुल गरीरहेको कुरा स्थानीय एक जना युवा ले बताए
बाटाे खन्ने क्रममा ५३७ वर्ष पुरानाे ऐतिहासिक सिक्का भेटिए